CHERRY "TURGENEVSKAYA": SHARAXAAD, DARYEELKA DEGELKA - CHERRY
Fikradaha kala duwan ee beerta, cherry "Turgenevskaya" wuxuu ku faanaa sharafta, gaar ahaan, doodda sharaxaadda noocyada: waxay soo diraan sawiro geedahooda, oo ka tago dib u eegis badan iyo talooyin ku saabsan miraha casiir koraya. Waxaan sidoo kale ka fekereynaa sida loo kobciyo sida cherry ee beerta our.
Cherry "Turgenevka": sharaxaadda noocyo kala duwan
Kala duwanaanshaha caleenta "Turgenevka" wuxuu soo muuqday sannadkii 1979, sababtoo ah dhowr sano oo shaqo ah oo ah caleemaha iyo dhowr sano gudahood ayaa noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ka mid ah dadka degaanka xagaaga iyo beerta. Geedku wuxuu koraa 3 m tallaabood oo toos ah oo kor u kiciyey taajkii, lafdhabarta dhumucda dhexdhexaad ah, toosan, jilifka jirridda iyo laamuhu waa bunni-cawl. Leaves yihiin cagaaran, cufan, oo leh dhamaadka calaamadda iyo gees jugged. Cherry blossoms ee bartamihii May oo leh ubaxyo afar ubax cad, iyo berry ku bislaadaan badhtamaha July. The miraha Cherry Turgenevka leeyihiin sharaxaad soo socda: berry waa weyn oo casiir leh, miisaanka mid kasta waa 5-6 g, dhexroorka waa qiyaastii 20 mm. Dhagaxgu wuxuu ku jiraa toban meelood oo ka mid ah berrinka oo si fudud ayaa loo kala soocaa. In cherry Turgenevka, berry ah u bislaadaan ku dhowaad siman, waxay dhadhan yihiin macaan iyo dhanaan leh dheeraadka dambe iyo caraf udgoon. Miraha Cherry waxaa ku jira fiitamiin B1, B6, C. Sidoo kale, waxay ku jiraan walxaha sida birta, magnesium, cobalt, coumarin iyo anthocyanin.
Cunista miraha "Turgenevka" waxay ka caawisaa dhimista xinjirta dhiigga iyo xoojinta muruqa wadnaha. Cunista cherry "Turgenev" waa ka hortag wanaagsan oo dhiig-yaraaneed. Miraha waa dhadhan fiican marka la wada baabbi'iyo cusub, la dubo oo la ilaaliyo, ku habboon lagu keydiyo. Intaa waxaa dheer, dhalidda ee "Turgenevka" waa mid sare, iyo berry ay u dulqaadanayaan gaadiidka.
Tilmaamaha beeritaanka cherry "Turgenevka": doorashada goobta
Cherry "Turgenevka" ma aha mid aad u baahi leh beerashada iyo daryeel dheeraad ah, laakiin waxaa jira waxyaabo qaar ah. Kufsiga laguma talinayo in lagu beeray meel hoose, iyo sidoo kale qoraallo. Warshad waa mid u adkaysata, laakiin beergooyska wanaagsani way ka fiican tahay in la siiyo goob qorrax leh. Goobta ugu fiicnaantu waxay noqon doontaa koonfur-galbeed, galbeed ama koonfur, taniyo qoyaanka xad dhaafka ah ee aan ku foorarsanayn ciidda, iyo qulqulka hawada qabooba oo dhoobo geedka.
Waa muhiim! Wixii beeritaanka jeeriga, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo sapling sanadle ah; haddii uu ka weyn yahay laba sano, wuxuu si xun u qaadan karaa xididada oo jiran karaa.
Xaaladaha cimilada ee geedka sii kordhaya
Cherry "Turgenev" wuxuu awoodaa in uu hor istaago heerkulkiisu hooseeyo xilliga qaboobaha, si uu u dulqaado maryaha iyo barafka. Kala duwanaanta noocaan ah ayaa ku kordhay jawi kasta oo ka mid ah aagga dhexe, oo awood u leh inay ku jirto 30-33 digrii oo baraf ah, haddii aanay jirin isbeddello heerkul ah oo soo noqnoqda.
Waa maxay ciidda jecel yahay cherry "Turgenevka"
Dhulka dhulku uu korayo waa inuu ahaadaa midiidin dhexdhexaad ah, oo doorbidi kara ciidda ciidda. Marka beerto noocyo of jeeriga "Turgenevka" waa in laga fogaadaa ciidda iyo ciidda ka badan, kaas oo si xun u saameyn doona horumarinta warshad iyo dhalid dhamaadka. Qoto dheer ee biyaha dhulka ah waa in aysan ka yarayn 150 cm dhulka dushiisa. Marka laga beerto geedo dhoobo ciid ah waa in lagu qaso ciid.
Si loo abuuro seedling si fiican u dego, waxaad samayn kartaa isku dar ah nafaqo iyo dila ciidda taas oo geedka kori doono. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay 5 kg oo ah humus, 200 g ash alwaax, 100 g of superphosphate iyo 30 g oo bacriminta potash ah.
Ma taqaanaa? Hal geed oo cherry ah "Turgenevki" wuxuu udhigi karaa ilaa 25 kg oo berry ah.
Beerto "Turgenev" Cherry
Geedka berri ah ee "Turgenev" ayaa la soo saaray guga ka hor inta aanuu ubaxsanaan kelyaha, si loogu habboonaado goobta cusub iyo koritaanka firfircoon ee geedka. Haddii la doonayo, geedo lagu beeray karaa dayrta, taas oo kalluunka si fiican u habboon in xaaladaha cimilada ee koritaanka. Si "Turgenevka" qodo dalool si qoto dheer oo mitir ah iyo dhexroor ah 0.5-0.7 m, waxaa fiican inaad ku qodo dalool 7-20 maalmood ka hor intaan la soo degin, sidaas darteed dhulka ayaa leh waqti ay ku degaan. Haddii cherry ku kora geedaha kale, masaafada udhiganta ugu dhow waa inay ahaataa ugu yaraan 2 m.
Qoryaha ayaa horay loogu hayaa 3-4 saacadood biyaha, si ay xididada u buuxiyaan qoyaanka, ceelka waxaa ka buuxsamaa isku daridda nafaqada horay loogu qeexay, seedling ayaa la dhigay iyo nidaamka xididka si taxadar leh loogu shubay isku dhafka iyada oo aan la gelin giraan. Bacriminta cherry waxaa lagu qodaa hareeraha hareeraha ku wareegsan, ku shubay baaldi biyo diirran iyo mulch carrada agagaarka geed leh peat. Ka dib, in seedling waa la xiraa si loo xiirto qoryaha qoryaha ah si loo ilaaliyo dhirta.
Sida loo daryeelo noocyo cherry "Turgenevka"
Daryeelka "Turgenev" inta lagu guda jiro beerashada ma aha mid adag oo aan xitaa beerta ugu khibrad badan. Xilliga jiilaalka, waxaa wanaagsan in lagu daboolo geedka, taas oo yareynaysa suurtagalnimada barafoobidda isbeddel deg-deg ah oo heerkulka hawada ah, iyo in la qafaasho aagga hoose ee leh balka ama peat.
Ka dib markii la beero, seedling cherry waxaa la waraabiyaa ku dhowaad maalin kasta, sida ciidda u engegay, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado joogitaanka qoyaan iyo qoyaan. Waraabinta waxaa lagu sameeyaa gudaha rukunka ku wareegsan, isla daloolka iyo bacriminta bacriminta macdanta hal mar sanadkii, guga. Ka dib markii cherry bilaabmaa inuu midho u dhali, bacriminta waxaa lagu dhaqmaa ka dib goosashada ee xagaaga. Bacriminta dabiiciga ah (digaaga ama lo'da lo'da) waxaa la isticmaalaa laba ilaa seddex sano laba tallaabo ah: markii ugu horaysa waxaa la isticmaalaa ka dib markii cherry uu yaraaday, ka dibna mar labaad xilliga kulul ee dhexe ee xagaaga. Inta lagu jiro Bisaylkiisa ee miro, jeeriga u baahan tahay waraabinta ka badan.
Waa muhiim! Wixii ka hortagga cudurada fangas ee cherry, waxaa lagu talinayaa in la beero seedling guga hore, ka hor inta ku hari budada.
Ka dib markii la waraabiyo, ciidda way qallajiyaan oo ay ku daboolaan qolof qallalan, waa in si taxaddar leh loo daboolaa qoto dheer oo ah 7-10 cm oo ah ogsijiinka si ay u gaarto xididdada geedka. Boogaha waa in laga saaraa ka dib muuqaalka. Sidoo kale waa in la jaro koritaanka cherry xididka, taas oo wiiqi doonaa geedka, qaadaya casiir.
Sida loo sameeyo taajka Turgenev cherry
Wixii horumarinta dhirta wanaagsan iyo fruiting tayo sare leh, manjo waa lagama maarmaan si loo sameeyo taajkii ubaxyada iyo jarjar laamood qalalan. Gooyaa waxaa loo samayn karaa geed jiilaalka guga hore. Meeshii gooyaa waa in la adeegsadaa beerta beerta si loo bogsado bogga. Gooyo ka hor fruiting bilaabmaa, foomamka taajka cherry, iyo ka dib muuqaalka miraha ugu horeeya, wuxuu qabtaa hawlaha nadaafadda. Waxaa lagula talinayaa in la gooyo laamihii caleemaha caleemaha uu ka kori karo in ka badan nus mitir, iyo sidoo kale laamaha koraya oo dhererkiisu ka hooseeyo 0.4 m heerka dhulka. Ka dib jiilaalka kowaad ee sapling, waxaa la isku daraa shan shan laamood oo asaasi ah oo loola jeedo jihooyin kala duwan. Ka dibna, taajkii johannesörka waa qaabeeyey, iska ilaalinta dhirta laanta, iyo sidoo kale saaro laamaha sare koraya. Laamaha cayayaanka iyo qalalan waa in la gooyaa marka la ogaado. Yareynta caleemaha hal sanno ayaa loo baahan yahay koritaanka laan ururada. Cherry Fruiting rejuvenate, jarida laamihiisa dhinaca, taas oo kicinaysa koritaanka caleemaha yar yar. Haddii loo baahdo, manjooyin waxaa lagu fuliyaa dayrta ilaa dhaxan, ka saar caleemaha jiran iyo qalalan iyo dhuuban laamihii taajkii.
Ma taqaanaa? Badanaa dhirbaaxa cherry Japanese - Sakura - waa xabbad ah ee goosashada wanaagsan bariis.
Cudurada iyo cayayaanka "Turgenevki"
Cudurada ugu caansan ee cherry "Turgenevka":
Kokkomikoz - lagu jabiyo fungi cherry, dulin, xaaladaha ugu wanaagsan ee horumarinta cudurka - hawada qoyan diiran wakhti dheer. Cudurku wuxuu isu muujiyaa xagaaga sida huruudka iyo guduudka caleenta, markaa caleemuhu waxay noqdaan kuwo la daboolo madow, oo qalalaan iyo dhacaan, laga yaabo inay iskudhafinayso caleen. Cuntooyinka fangasku waxay ku dhaafaan waxyeelo jilicsan, dhulka iyo qashinka dhirta, caleemaha iyo miraha aan la dhicin. Si aad uga takhalustid coco-ikso-socodka waxaa lagu samayn karaa adoo ku daaweynaya qoryaha Bordeaux isku dar ah, caleenta yellowed falle waa in la burburiyaa.
Klesterosporiosis waa cudur fungal ah oo ka muuqda caleemaha leh dhibco madow, ka dib 2-3 toddobaad, caleemaha infekshanku ka dhaco; Meelaha brown waxaa saameeya midhaha, taas oo markaa dib loo dhigo oo la qalajiyo. Qarxay barkeed, cirridku way istaagtaa. Qaybaha ay saameeyeen ee geedka ayaa ku xiran in la gooyo oo la gubo, jilif jirka ah oo leh cirridka cirridka waxaa lagu daweeyaa garoonka beerta, geedka waxaa lagu buufiyaa "Topsin" ama "Early".
Moniliasis waa cudur fungal ah oo saameynaya inflorescences; haddii aan la daweyn, laamihii ubaxyada qallajiyey, caleemaha, jilifka iyo berry ayaa lagu daboolayaa qolof adag, laan dillaac ah, iyo natiijada geedku dhinto. Waxaa suurtagal ah in laga takhaluso cudurka sida isku mid ah sida asperiasis.
Anthracnose waa cudur fungal ah oo saameeya midhaha, oo muujiyay nooc caajis ah ee berry, kaas oo markaa lagu daboolay koritaan, iyo ubaxyada casaan ee mycelium of fungus. Waxaa suurtagal ah in laga takhaluso anthracnosis by processing "Poliram" ka hor ubax, ka dib, iyo mar kale 15 maalmood ka dib.
Foosto - waxay u muuqataa dhibco caleemaha caleenta caleemaha. Caleemaha saamoobay waa in la gooyaa oo la burburiyaa, iyo qoryaha waa in lagu daweeyo Bordeaux isku dar ah.
Daaweynta xanuunka - waxaa ka yimaada dhaawaca farsamada ee jilifka, kaas oo muujinaya sii-deynta maqaarka-caleemaha, cirridku wuxuu sababi karaa geerida geedka. Meelaha ay dhibaatadu saameysey waa la nadiifiyaa waxaana lagu daaweeyaa caleemo buluug ah. Sida qiyaas ka hortag ah, ayaa la muujiyaa xoqan.
Cayayaanka ugu caansan ee cherry "Turgenevka" iyo hababka ula dagaallama iyaga:
Cherry aphid - waxay muujinaysaa on caleemaha cidhiidhi ah dhamaadka laanta iyo caleemaha yar yar laga bilaabo gu'gii dambe ee xagaaga hore. Si aad uga takhalusto jeeriga cayayaanka waxaa lagu buufin karaa Aktar ama Fufanon.
Duulinta Cherry - waxay muujinaysaa laga bilaabo May ilaa June iyada oo la jilicsan madow ee berry, kaas oo markaa kallana. Waxaad ka guuleysan kartaa duulimaad iyadoo la adeegsanayo "Agravertin", "Aktellika" ama "Fitoverma".
Cherry slimy sawfly - muuqday inta lagu jiro xagaaga by muuqaalka ah ee dirxiga khafiif ah madow on caleemaha. Si loola dagaallamo sawirada, buufinta geedka leh Confidor waa la fuliyaa.
Cherry caleemaha aboorka - waxyeelo soo bandhigay caleemaha yar yar, laga yaabo inay guuldareysato xilli dhan. Harta dhirta waa in laga saaraa goobta oo la gubo. Ka takhalus daweynta qoriga dhuxusha "Akteliom" ama "Fufanon."
Aboorka jiilaalka - ayaa lagu muujiyey dayrta caleenta caleen, oo la xiiray saxan warqad. Waxay gacan ka geysan doontaa in laga takhaluso "Mospilan" iyo "Aktar", oo is furtay iyada oo la raacayo tilmaamaha.
Sawumro huruud ah oo sawfly ah - ayaa la soo bandhigay bishii May iyadoo bixitaanka cayayaanka ka hor inta uusan ubaxyo ubaxyo. Diyaarinta "Fitoverm" iyo "Agravertin" ayaa si guul leh uga takhalusay sawfly.
Cherry "Turgenevka": goosashada
Ka dib markii 4-5 sano ka dib markii seedling la beeray, miraha ugu horeysay u muuqdaan, taas oo u bislaadaan ku dhowaad siman, dhexe ee xagaaga. Miraha bislaaday ayaa dhacaya. Goynta waxaa la doorbidayaa subaxa maalinta qallalan. Wixii ilaalin fiican, cherry waxaa laga saaraa geed leh stem ah. Goosashada sanduuqyada bacaha ama dambiilaha khafiifka ah waxaa lagu kaydiyaa ilaa laba todobaad heerkul ah -1 ... +1 ° S iyo qoyaan badan. Qalabka dheeriga ah ee lagu keydiyo waxay ku xiran yihiin bac caag ah oo lagu ridayaa barafeeyaha.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kala duwan ee "Turgenevka"
Cherry "Turgenevka" ee beerta waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee jeeriga for unpretentiousness iyo goosashada dhadhan fiican leh. Faa'iidada ee berry waa dhadhan, yar yar, lafta si fudud u goyn karto, kaydinta inta badan ee miraha cusub. Berry waxay ilaaliyaan muuqaalkooda suuqa oo waxay dalbanayaan iibsadayaasha, taas oo ah mid u wanaagsan beeralayda iibinaya dalagooda.
Ma taqaanaa? In England, cherry fruiting sii kordhaya, taas oo horey u jeestay 150 sano, iyada oo dhexroorka taajka ka badan 5 m, iyo dhererka - in ka badan 13 m.
Faa'iidada noocan ah ee cherry waxaa loo tixgeliyaa inay tahay caabuq diimeed oo sababa cayayaanka ubaxa. Iyada oo qaboojiyaha degdega ah, ka dib kelyaha ayaa horay u bilaabay, itimaalka ah ee dhimashada dalagga waa mid sareeya. Xilliga kuleylka, geedku wuxuu u baahan yahay waraabinta, sababta oo ah waxa ay si xun u dareemaysaa xaaladaha qalalan. Khasaaro qaraabo waa baahida loo qabo pollinators for geedka Turgenevka, maxaa yeelay waa qayb ahaan is-fruited. Si aad tan u sameyso, waxaad u baahan tahay inaad ku beerato jeeriga noocyada kala duwan ee "jecel", "Dhalinyaro" ama "Melitopol Joy" fogaan ah ilaa 35 mitir, ama ugu yaraan dhirta geedka roogga ah "Turgenevka".
Faa'iidooyinka badan ayaa ka badan faa'iidooyinka, iyo sanado badan Turgenevskaya Cherry si deeqsinimo leh u siinayaa bannaanka u ah miraha qurux badan.